Saaka & Xubintii Ciyaaraha iyo cRx Yameni: Maanta waa Arsenal fkf Chelsea (dhegayso) – Radio Daljir
Saaka & Xubintii Ciyaaraha iyo cRx Yameni: Maanta waa Arsenal fkf Chelsea (dhegayso)
Agoosto 6, 2017 2:37 b 0
Kooxaha Arsenal iyo naadiga Chelsea ayaa kuwada ciyaari doona garoonka wayn ee Wemble koobka loo yaqaano Community Shield. Labada kooxdood ayaa tijaabo adag gali doona kahor inta uusan horyaalka ingiriisku bilaaban.
Kooxda Barelona oo haysata lacagtii ay ka heshay iibkii Neymar ayaa heshiisyo hordhac ah la samaysay qaar kamid ah ciyaartoyda ay u aragto in ay kooxda ku soo kordhin karaan waxtar muuqada.
Inigo Martinez oo difaaca dhexe uga ciyaara kooxda Real Sociedad ayaa kooxdiisa ku wargaliyay in uu doonayo ku biiritaanka Barcelona. Philippe Coutinho oo asna Livepool ka tirsan iyo Ousmane Dembel oo hada ka tirsan kooxda Borussia Dortmund ayaa ka mid ah ciyaartoyda hadda la hadal-hayo.